Tag: famoahana gazety | Martech Zone
Tag: famoahana gazety
Raha vao manomboka ny fifandraisana amin'ny daholobe ianao dia aza hadino ny mijery ny Torolalana ho an'ny PR nataon'i Brownstein & Egusa. Ary raha mila tsipiriany misimisy kokoa momba ny paikadin'ny PR, aza hadino ny mamaky ny lahatsoratry ny vahiny - Torohevitra PR avy amin'ny Mpanoratra VentureBeat teo aloha - avy amin'i Conrad Egusa ao amin'ny bilaogy mahafinaritra an'i Scott Monty. Misaotra manokana an'i Marty Thompson tamin'ny fahitana! Raha hanampy zavatra hafa aho dia dingana iray eo anelanelan'ny 3
Ity dia fampitahana mahafinaritra nomen'ny Dendrite Park izay tsy azoko nifanarahana bebe kokoa. Izy ireo dia manolotra fomba fiasa marobe amin'ny paikadim-barotra momba ny votoatinao izay mitaky fototra lehibe ary mitombo avy eo! Ity dia hazo fahendrena amin'ny marketing amin'ny atiny ho an'ny orinasanao. Ny fakany mivaingana (fotodrafitrasa IT, SEO ary analytics) dia ilaina mba hihazonana ny vatan-kazo (tranokalanao) hitondra ny lanjan'ireo hetsika media sosialy (satroboninahitra) izay mitondra anao